Uma udinga imininingwane yeglue noma ugcwalise izikhala kanye nezikhala, ungasebenzisa i- "Poxypol", imfundo ezochazwa kulesi sihloko. Le glue iyinhlanganisela ye-epoxy eyinhlanganisela emibili enezici ezisheshayo. Ingxube eyaziwa njengama-welding ebandayo.
Uma udinga ukubamba i-raber noma insimbi, u-faience noma izinkuni, ingilazi noma ukhonkolo, ungasebenzisa ukukhishwa kwe-"Poxipol", okumele kulungiselelwe ngaphambi kokusetshenziswa. Liyanda kakhulu namhlanje, ngoba lingasetshenziswa ezindaweni ezahlukene, phakathi kwazo:
Amakhonksi ahlangene nama hook;
Ukuqinisa izingalo zommese;
Amamodeli ezindiza ezindiza;
Ukuqiniswa kwamatayela aphansi;
I-carbide kanye nekhabethe elibetha;
Izimbobo zokufaka uphawu emasimini aluminium;
Ukudonsa ngensimbi nangokhuni;
Phakathi kwezinye izinto, "i-Poxipol", imfundo yokusetshenziswa okumele ifundwe ngaphambi kokusetshenziswa, izokuvumela ukuba uhlanganise izitsha eziphukile, ulungise isikebhe, uthathe ukuvuza noma uhlanganise isibuko. Lokhu kusetjenziswa kungasetjenziswa ukufaka amathuluzi kuma-laboratories namanzi we-gluing.
Lokhu kukwakhiwa kungaqinisa i-tile ezindongeni noma ukulungisa amapayipi. Amanye amakhosi asebenzisa ingxube yokulungiswa kwezintambo zokudoba kanye nohlaka lwekhonkrit. Ngokuphumelelayo, "i-Poxypol" iqeda izimbobo ezitsheni zekhonkrithi nezensimbi, futhi isebenza njenge-sealant yamathangi namathangi.
"I-Poxipol", imfundo yokusetshenziswa okufanele yaziwe kuwe ngaphambi kokusetshenziswa, ilungiswe ngevolumu elanele. Ochwepheshe abaphakamisi "ukugaya", balungiselela ivolumu okungenani 1 cm 3 . Kubalulekile ukugcina ukulinganisela koku-1 ukuya ku-1.
Umsebenzi kufanele wenziwe ekamelweni lokushisa. Ngemuva kokulungiselela ukubunjwa kwemaminithi angu-10, kuzokwenzeka ukusabela kwamakhemikhali. Uma uhlanganisa, akudingeki usebenzise umshini bese ucindezela izingxenye ngokumelene nomunye. Ungavali izakhi zokudonsa, umklamo kufanele ushiywe endaweni yokuphumula.
I-polymerization izofinyelelwa ngesikhathi uma izinga lokushisa kwemvelo liphakeme kakhulu. Uma izinga lokushisa liyancipha, isikhathi sokumisa sizoba isikhathi eside. Ihora emva kokusetshenziswa kokubunjwa kwendawo kungenziwa ukugaya, ukugaya kanye nokubona.
"I-Поксипол", imfundo lapho isicelo kufanele saziwa khona kuphela ochwepheshe, kodwa futhi nasendlini yabanikazi, kuzokoma ngokuphelele ngosuku emva kokuxuba izingxenye. Izithako kufanele zixutshwe kahle ngaphambi kokusetshenziswa. Kufanele kukhunjulwe ukuthi i-glue ebonakalayo iyasebenza njenge-dielectric.
Izincomo zokusetshenziswa kweglue
Uma ufuna ukufeza umphumela omuhle lapho uhlanganiswa, ubuso kumele buhlanjululwe ngothuli nendawo yokungcola, amagesi namafutha. Kuphela lapho iglue izosebenza. Ukuze uthole izinto ezinjenge-rubber, insimbi, ukhonkolo, ingilazi kanye ne-ceramics, kanye nama-plastiki aqinile, i-fibro-konterikhi "i-Poxypol" ifanelana ngokunokwenzeka. Noma kunjalo, i-polyethylene, i-Teflon ne-polypropylene ukwakheka ngeke kuhlangane ndawonye.
"Poxypol" - ukushisa okubandayo, okumele kusetshenziswe endaweni ebanzi. Ukuze wenze lokhu, izingxenye ezibushelelezi zikhishwa, futhi emva kokulungiswa, okuningi kusetshenzisiwe. Ungakwenza ngisho nangaphansi kwamanzi. Uma ufuna ukusebenza nezindawo eziyinkimbinkimbi, ukuze uthuthukise ukunamathela, kunconywa ukuba usebenzise ungqimba omncane wokunamathisela oxhumana naye, okumelwe uvunyelwe ukuba womile okwesikhashana sehora. Lokhu kusebenza kumikhiqizo eyenziwe kusuka:
Ukulungiswa okunjalo okunamathisela akufanele kube ne-toluene.
Ukushisa kokusetshenziswa nezinye izici zohlelo lokusebenza
"I-Поксипол" ngensimbi isondela ngokuphelele. Ukubunjwa kunezici zokuphulukisa ngokushesha. Ukushisa kokusetshenziswa kungahluka kusuka ku-20 kuya ku-24 ° C. Ngemuva kwekhefu elingu-10, ukubunjwa kuzoshintsha umbala ube obala futhi uqine ngaphandle kokushintsha ivolumu yayo. Indawo yomsebenzi izofinyelela amandla ayo amakhulu emahoreni angu-24, okuyiqiniso uma izinga lokushisa kwamakamelo lishintsha kusuka ku-21 kuya ku-25 ° C.
I-adhesive "i-Poxipol", imfundo yokusetshenziswa okufanele ikusize ukugwema amaphutha, inezindawo zokuvikela. Kodwa-ke, lokhu kuyiqiniso uma izithako ozihlanganisela emzimbeni owodwa. Njengeminye imininingwane emihle kubalulekile ukunikeza ukuphikiswa okuhle kakhulu ekunciphiseni. Amandla okuqina angama-MPa angu-8. I-adhesive inezinga elihlukile lokumelana namakhemikhali. Isibonelo, ukwakheka kuhle kakhulu ngaphansi kwethonya lamanzi kanye nemvelo. Okubi kakhulu ukuthi ingxube izobhekana nama-hydrochloric ne-sulfuric acid, amafutha amaminerali, kanye ne-petroli ne-toluene.
"I-Poxipol", izinga lokushisa lokusetshenziswa okungafanele lihluke kulokho okuphakanyisiwe, lisetshenziswe ngokuhambisana nezinyathelo zokuphepha. Kubalulekile ukugwema ukuxhumana ngesikhumba namehlo, njengoba lokhu kungabangela ukucasuka. Uma lokhu kwenzeka okwamanje, kuyadingeka ukuthi ugeze isikhumba ngesisombululo samanzi asozini. Esimweni esiphulukisiwe, lokho akuyona into enobuthi.
Ukufudumala kwamafutha kusetshenziswa yonke indawo namuhla. Lokhu kungenxa yezici zayo ezinhle, kuhlanganise nobunzima bensimbi nokumelana nokusabalalisa ngisho nasezindaweni eziqondile. Ingxube ingasetshenziswa nanoma yimaphi amathuluzi, ubukhulu besendlalelo bungabe buhlukile, indaba ayinweli emva kokuma futhi ayihlehli. Ekubunjweni kwayo azikho izixazululo, futhi emva kokuqiniswa kungahle kukhishwe.
Ngaphambi kokumiswa, i-adhesive ingafakwa ngommese noma i-spatula, ngemva kokukhipha ithuluzi emanzini. Uma ubukhulu bungenakuqedwa, i-tube idinga ukufudumala kancane. Ama-caps kuma-tubes akufanele ashintshwe.
Amanzi ashisa ithawula ngesitimela ngokuxhumeka kohlangothi. Ukushisa ithawula ngesitimela: okungcono
Izipikili zokwakha: ziyini futhi zisebenzeleni?
Imishini yokugaya i-Angle (USM) "Makita"
Iklabishi, okuyinto ikhalori ongaphakeme kakhulu, okuhle empilweni yakho
Indlela ukuxhuma induku yokudlala kwikhompyutha yakho.